အတန်းဖော် | November 2019
အခြားအသုံးပြုသူများမှလက်ဆောင်များပေး, ဒါခေါ် Oka, သငျသညျန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည့်နှင့်အတူသင်၏ပရိုဖိုင်များအတွက်အဆင့်အတန်းနှင့်အ function ကို - လူမှုကွန်ယက်ကိုအတန်းဖော်များ၏သင်တန်းသားများကိုမကြာခဏအရင်းအမြစ်အတွင်းပိုင်းကို virtual ငွေကြေးဆည်းပူး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းပလပ်စတစ်ရက်ဒစ်ကတ်များဖြစ်ကြသည်။
သူငယ်ချင်းများ - ဒီသူ၏မိသားစုနှင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူတစ်ဦးတန်းတူအပေါ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သဘောထား၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လူ့ဆက်ဆံရေးရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးများမှာကျနော်တို့ကိုအခြားသူများမှကိုယ်ချင်းစာနှင့် antipathy အာဟာရ။ နှင့်အညီ, သင်တန်း, အများပြည်သူမူဝါဒနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလူမှုကွန်ယက်ကိုအတိုင်းဤအပိုင်းကိုအပေါ် projected နေကြသည်၏။ ကျနော်တို့အတန်းဖော်မှာသူငယ်ချင်းများကိုဖြစ်စေလျက်, မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့, ဓါတ်ပုံများနှင့်သတင်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်, အကျိုးစီးပွားအုပ်စုများအတွက် communicate ။
Odnoklassniki ၌သင်တို့၏စာမျက်နှာ Login
ကလူအတော်များများဟာသန်းပေါင်းများစွာသော, လူမှုကွန်ယက်ကို Odnoklassniki အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာရှိသူငယ်ချင်းမိသားစုနှင့်အသိအကျွမ်းနှငျ့ဆကျသှယျ, လဲလှယ်သတင်းများ, အားလပ်ရက်နှင့်ပွဲတော်များအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဂုဏ်ပြု, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကို upload ။ အကောင့်၏ရှေ့မှောက်တွင်သယံဇာတမဆိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်များအတွက်လုံလောက်သောဆက်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများပေးသည်။
ဒါခေါ်မှတ်စုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသတင်းဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယို, ဗီဒီယို streaming များအချို့စာသား, ကြော်ငြာတွေနှင့်တူသောတစ်တိပ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒီသယံဇာတအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသုံးပြုသူဖို့လူမှုကွန်ယက် Odnoklassniki နေပါသည်။ ဤအချက်အလက်ချက်ချင်းသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးရန်နှင့်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Odnoklassniki ရှိ "မိတ်ဆွေများ" ရန်တောင်းဆိုမှု Cancel
မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်၌, သင်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းအသိအကျွမ်းနှင့်သည် "သူငယ်ချင်းများ" ၌အကျိုးစီးပွားလူတွေကိုထည့်နိုင်သည်။ သငျသညျအမှားလေလံအားဖြင့်လူတပို့ပေးပါ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး user ကို add ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့အဲဒါကိုအခြားဘက်မှာယူသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်မည်သည့်အခါယခုအချိန်တွင်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစရာမလိုဘဲ, ဖျက်သိမ်းအတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အတန်းဖော် - ဤအင်တာနက်ရုရှားအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးလူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်၎င်း၏လူကြိုက်များပေမယ့် site ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ် load မထားဘူး။ အကြောင်းရင်းများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ site တစ်ခုအများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသူဘက်မှာ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝ boot မနိုင်မှုကြောင့်အရာမှအတန်းဖော်မအောင်မြင်မှုများကိုဖွင့်မပေးဘို့အဓိကအကြောင်းရင်းများ။
Odnoklassniki အတွက်ဖဲကြိုး Customize
News feed, မည်သည့်အသုံးပြုသူတိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ယက် Odnoklassniki စာမျက်နှာပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရင်းအမြစ်များ၏ကျယ်ပြန့်မျက်နှာတရာယူသမျှသောဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာအသုံးပြုသူရုပ်ရှင်မလိုအပ်သောနှင့်သူ့အဘို့စိတ်မဝင်စားသတိပေးချက်တွေအများကြီးထဲမှာတူသောမပြုစေခြင်းငှါ။
အဆိုပါတံခါးပိတ်ပရိုဖိုင်းကို Odnoklassniki ၏အဖွင့်
လူမှုကွန်ယက်ကိုအတန်းဖော်အတော်များများဟာအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦး paid feature ကို "ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရေးဖိုင်" ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါတံခါးပိတ်ပရိုဖိုင်းကိုသင်အကြောင်းကိုအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်တို့ကိုလုံလုံခြုံခြုံကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောနှင့်မသင့်လျော်သည်စီမံကိန်းသင်တန်းသားများအနေဖြင့်ကာကွယ်ပေးရန်ခွင့်ပြုတဲ့အရင်းအမြစ်အပေါ်သာသင်၏မိတ်ဆွေများမှရရှိနိုင်သည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ ဒီအရေးပေါ်လိုအပ်နေသညျထလျှင် Odnoklassniki အပေါ်တစ်ဦးပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ငါ password ကို Odnoklassniki ဘယ်လိုရှုမြင်ကြဘူး
လူ့မှတ်ဉာဏ်ဝေးပြီးပြည့်စုံသောအနေဖြင့်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သုံးစွဲသူလူမှုကွန်ယက်ကို Odnoklassniki ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုထိုကဲ့သို့သောကံဆိုးနားလည်မှုလွဲနှင့်အတူပွုနိုငျသနညျး စိုးရိမ်ထိတ်လန်အေးဆေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မအဓိကအရာ။ သငျသညျအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုကယ်ဖို့သငျသညျ Friendster မှာသင့်အကောင့်သို့ log ကျသောအခါ အကယ်. သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို Odnoklassniki ခံစားခြင်း, သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဘရောက်ဇာထဲမှာ code ကိုစကားလုံးရှာကြည့်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။
Odnoklassniki တွင် "အားလုံး Inclusive" ၏ Deactivate
အားလုံးပုံမှန်လူတွေလက်ဆောင်များလက်ခံရရှိရန်ကိုချစ်။ အခြားလူများကသူတို့ကိုပေးရကျေနပ်ထက်မနည်း။ ဤကိစ်စတှငျဆိုက်ဘာစပေ့နေ့စဉ်ဘဝကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။ လူမှုကွန်ယက်အတန်းဖော်များ၏ developer များဆောင်ရွက်ရာဘို့တစ် paid လစဉ်ကြေးပေးသွင်းဝေမျှဖို့မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းဖို့လက်ဆောင်တွေအမျိုးမျိုးပေးစေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးရာ, "အားလုံးပါဝင်နိုင်" သူတို့အသုံးပြုသူများကိုဆက်ကပ်။
ကျနော်တို့ Odnoklassniki အတွက်သင့်စာမျက်နှာရှာနေကြသည်
သငျသညျနှစ်ဦးစလုံး Third-party ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (Yandex Google က, etc) ကို အသုံးပြု. နီးပါးမည်သည့်အသုံးပြုသူအတန်းဖော်များ၏စာမျက်နှာကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်အတွက်ပြည်တွင်းရေးရှာဖွေရေးကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (ဥစ္စာအပါအဝင်) အချို့သောအသုံးပြုသူအကောင့် privacy settings တွေကိုရဲ့ index ကနေဝှက်ထားနိုင်စိတျထဲတှငျထမျးရပါမည်။
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအတန်းဖော်နှင့်အတူဓာတ်ပုံကို Download လုပ်ပါ
လူမှုကွန်ယက်ကိုအတန်းဖော်မဆိုအသုံးပြုသူဓာတ်ပုံများ upload တင်လို့ရပါတယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်။ ဆိုက်ပြီးသားကို default browser မှာတညျဆောကျတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့, သင့်ရဲ့ PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုမှဓါတ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းရန်အဘယ်သူမျှမ built-in feature ကိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း။ အတန်းဖော်တစ်ဦး site ကိုသူ့ဟာသူဒေါင်းလုပ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေတွင်ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကြောင်းမီဒီယာအကြောင်းအရာ (ဂီတ, ဗီဒီယို, ဓာတ်ပုံများ, Animation) အားဒေါင်းလုပ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ရှိသောကံကောင်းထောက်မစွာ, ယနေ့ဒီအန့်အသတ်န်းကျင်ရဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်ပါဘူး။
အချို့သောအခြေခံကျကျသူတို့ထဲကတစ်ခုခုနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ချင်ပါဘူးမဟုတ်တိုင်းကိုတဦးတည်းလုံးဝအပေါငျးတို့သလူကြိုက်များလူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, banal တစ်စုံတစ်ဦးကိုတင်းကျပ်သောမော်ဒပိတ်ပင်ခဲ့။ သူကအခြားသောသူတယောက်အသုံးပြုသူကိုရှာဖွေ, Friendster အတွက်အကောင့်တစ်ခုရှိသည်ပါဘူးသူအသုံးပြုသူမှဖြစ်နိုင်ပါသလော ဟုတ်ကဲ့, ကအတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာလူမှုရေးကွန်ရက်များတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိအကျွမ်းနှငျ့ဆကျသှယျဖို့ပျော်ရွှင်ကြသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရိုးရှင်းသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျအပြည့်အဝအပြည့်အဝအဓိပ်ပာယျနှငျ့သငျသညျမိမိတင်ပါတယ်မှဖော်ပြချင်သောအကြောင်းအရာများရောင်ပြန်ဟပ်လို့မရပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည်, ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်, မည်သည့် video file ကိုသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုမှပူးတွဲနိုင်ပါတယ်။
Odnoklassniki န်ဆောင်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရှုပ်ထွေးကြောင်းလောက်အောင်သေးငယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကို default အတွက်ရပ်တည်ထားတဲ့ဖောင့်အရွယ်အစား, ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, စာမကျြနှာပျေါတှငျဖောင်တိုးမြှင့်ကူညီရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အများဆုံးခေတ်သစ်မော်နီတာနှင့်ပါမစ်များအတွက် Odnoklassniki တန်ဖိုးရှိဖတ်လို့ရအောင်စာသားအရွယ်အစားအတွက် OK ကိုစာလုံးအရွယ်အစားပုံမှန် Features ။
Odnoklassniki တစ်ပို့စကတ် Send
ပို့စကတ် Odnoklassniki လက်ဆောင်တွေထိုသူအချို့တို့သည်အခြားအလက်ဆောင်နဲ့အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦး box ထဲမှာပြသမည်မဟုတ်ကြောင်း မှလွဲ. ဆင်တူသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, default အနေနဲ့လူမှုကွန်ယက်ကကမ်းလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအများအပြားကတ်များစျေးကြီးဖြစ်ကြပြီးမီဒီယာအကြောင်းအရာ (ဂီတနှင့်ကာတွန်း) ရှိသည်။ ဒီလူမှုရေးကွန်ယက်တွင်အတန်းဖော်အတွက်ကတ်များတွင်, သငျသညျပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျ (သေချာပေါက်တစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့အတန်းဖော်ခဲ့သည်မဟုတ်) အတွက်ဒါမှမဟုတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင့်လျော်သောသေတ္တာထဲမှာနေရာချပါလိမ့်မည်သည့် "လက်ဆောင်ပေးမယ်" အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှတစ်ဦးကဒ်ပို့နိုင်သည်။
Odnoklassniki ရှိ "နာမည်ပျက်စာရင်း" ကျော်လွှား
ကလူကို "နာမည်ပျက်စာရင်း" (ES) ကိုသငျသညျကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်ရှာတွေ့ပါကသင်ကသူ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုရေး, သူ့စာမျက်နှာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်, အမြင်သူ၏ "တိပ်ခွေ" ကို update ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထိုကဲ့သို့သောသော့ခတ်ပတ်ပတ်လည်ရဖို့သေးငယ်တဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ Bypass လုပ်ရဘေးအန္တရာယ် Odnoklassniki တရားဝင်စံနည်းလမ်းများသင်ကထဲက get သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သူတို့ကိုအားဖြင့်ချမှတ်ထားသည့်ကန့်သတ်ကျော်လွှားဖြစ်လျှင်, အရေးပေါ်ဖို့ရာ၌ခန့်ထားပြီလျှင်, သင်သည်ထို vnosshego သင်လူတစ်ဦး၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲမဟုတ်နိုင်။
သင့်အနေဖြင့်လူမှုကွန်ယက် Odnoklassniki ပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာ၏မာနထောင်လွှားပိုင်ရှင်ဖြစ်လာကြပါပြီဘယ်မှာစတင်ရန်မသိကြသလော ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးနဲ့အညီညှိဖို့သင့်အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလွယ်ကူခြင်းနှင့်မဆိုအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူ၏အတော်လေးနိုင်စွမ်းလုပ်ပါ။
အခုတော့နီးပါးတိုင်းလူမှုကွန်ယက်ဆိုက်၏အခြားအသုံးပြုသူများမှတပိုင်တနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေး, ရှိပါတယ်။ ဤတွင်နှင့် Odnoklassniki အချို့သောအချိန်များအတွက် "5+" ဥပမာ, သငျသညျထို site အချို့ကိုနောက်ထပ် features တွေဖွင့်လှစ်ရန် "ကိုယ်ပျောက်" သို့မဟုတ်ရမှတ်၏စစ်အစိုးရကခွင့်ပြုထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးရှိသည်။
ဖြစ်ကောင်းမိတ်ဆွေများကသူ့ကိုလက်ဆောင်တွေကိုစေလွှတ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူရဲ့ကိုယ်ပွား, လှပသောစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ရယ်စရာဓါတ်ပုံတွေနှင့်အတူအလှဆင်သောအခါတစ်လူမှုကွန်ယက် Odnoklassniki မေတ္တာတော်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသုံးပြုသူ။ သို့သော်ဆက်ဆက်ပိုပြီးသာယာနေတဲ့အားလပ်ရက်များအတွက်သို့မဟုတ်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမိတ်ဆွေများကိုမွေ့လျော်ရန်။ ကို virtual ငွေပေးချေမှုတည်ဆဲအဆိုပါစီမံကိန်းကိုအတန်းဖော်အတွင်းစိတ်ဘဝကိုဆိုလိုသည် - ဒါခေါ် Oka သာမန်ပိုက်ဆံငါတို့လက်ဆောင်တွေပို့ခြင်းအပါအဝင်န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး, ပျော်မွေ့နိုင်သောဝယ်ယူ။